गरिमा विकास बैंकलाई चाँडै ‘क’ वर्गको बैंक बनाउन प्रतिबद्ध छौं : सीईओ ढकाल | Himalaya Post
गरिमा विकास बैंकलाई चाँडै ‘क’ वर्गको बैंक बनाउन प्रतिबद्ध छौं : सीईओ ढकाल
Posted by Himalaya Post | १९ पुष २०७७, आईतवार २१:०९ |
– गोविन्द ढकाल
प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)
गरिमा विकास बैंक लिमिटेड
गरिमा विकास बैंक १४ औं वर्षमा प्रवेश गरेको सन्दर्भमा यो यात्रालाई कसरी सम्झनुहुन्छ ?
हामी १४ औं वर्षमा प्रवेश गरेका छौं । गत मंसिर ७ गते यो अवसरमा हामीले धन्यवाद कार्यक्रम पनि गरेका थियौं । २०६४ सालमा स्याङ्ग्जाको वालिङबाट ९ जनाले शुरु गरेको बैंक सहरी क्षेत्र हुँदै अहिले देशभर विस्तार भएको छ । सानो ग्रामिण क्षेत्रबाट २ करोड ६५ लाख पूँजीमा खोलेको बैंकका अहिले देशभर १०६ वटा शाखा, जसमा ५५ देखि ६० प्रतिशत शाखाहरु गाउँपालिका र भर्खर नगरपालिका बनेका ग्रामिण क्षेत्रहरुमा छन् । बाँकी शाखाहरु काठमाडौं उपत्यका लगायत देशका सबै ठूला सहरहरुमा रहेका छन् । अहिले बैंकको क्यापिटल ३ अर्ब २५ करोड पुगेको छ । सानो बिजनेशबाट सुरु भएको हाम्रो यात्रामा अहिले हाम्रो पोर्टफोलियो १ खर्ब पुगेको छ ।
छोटो समयमा बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा हामीले बलियो उपस्थिति जनाएका छौं । प्रत्यक्ष १२ सयलाई रोजगारी र हाम्रा ५ लाख ग्राहकहरु मध्ये ३० हजार ऋणीहरुले अप्रत्यक्ष रोजगारी पाईरहनु भएको छ ।
बीचमा धेरै उतारचढावहरु आए, धेरै बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु लिमिटेशनमा गए । तर हामी ग्रामिण क्षेत्रबाट सानो निक्षेपसहित आएपनि त्यस्तो समस्या भएन । हाम्रो वचत अपडाउन हुने खालको थिएन, गाउँघरहरुबाट हजार, लाखका दरले निक्षेप संकलन भएकाले पनि त्यस्तो समस्या हामीले भोग्न परेन ।
आजका दिनसम्म आइपुग्दा नाफाका हिसाबले अरुभन्दा केही पछाडि हामी हुन सकौंला तर संस्थागत सुशासन, कर्मचारीको मेहनत तथा
सञ्चालक समिति तथा सरोकारवालाहरु सबैको सहयोग सद्भावले गर्दा हामी अग्रणी स्थानमा छौं । विकास बैंकहरुमा हामी अग्रणी बन्दै उच्च गरिमाका साथ अघि बढिरहेका छौं । यसलाई अझै सबल बनाएर जाने गरी हामीले काम गरिरहेका छौं । सेवा विस्तार र प्रविधिमैत्री वित्तीय सेवा वृद्धिका लागि हामीले काम गरिरहेका छौं ।
गाउँ गाउँमा प्रविधिमैत्री सेवा सञ्चालनका लागि अब हाम्रो ध्यान केन्द्रित भएको छ । त्यसै अनुसार सेवा प्रबाह गर्नका लागि बजेटमा योजना नै राखेर हामीले काम समेत अघि बढाईसकेका छौं ।
१४ वर्षको अनुभवका दौरान हामीले आजसम्म सम्पत्ति लिलाम गर्नुपर्ने अवस्था आएको छैन, यो हाम्रो सबल पक्ष हो । यो अवधिमा हामी सन्तुष्ट छौं ।
बैंकको अबको लक्ष्य के छ ?
५ वर्ष अगाडि नै हामीले गरिमा विकास बैंकलाई २०८० साल सम्ममा गरिमा बैंक बनाउने बिजनेस प्लान बनाएका थियौं । सोहीअनुसार पूँजी वृद्धि गरेर हामीले काम पनि गरिरहेका छौं ।
तर पूँजी वृद्धि गरी बैंक मर्जरमा जानुपर्ने, विकास बैंकलाई वाणिज्य बैंकको लाइसेन्स दिन नसकिने भन्ने कुरा आएपछि हामीलाई हाम्रो लक्ष्य प्राप्तिमा केही कठिनाइ भएको हो ।
हाम्रो योजना त गरिमा बैंक नै बन्ने हो । विकास बैंकबाट ‘क’ बर्गको बैंकमा जाने हाम्रो पूर्ववत् योजना अनुसार पूँजी बृद्धि गर्ने, अन्य बैंक तथा बित्तिय संस्थाहरुलाई मर्ज गर्ने र ठूलो बन्ने रणनीतिका साथ हामीले काम गरिरहेका छौं । यस्मा नियमनकारी निकायको साथ सहयोग र नीति सहयोगी बन्छ भन्ने हामीले बिश्वास लिएका छौं । भोलि नीतिले दिएको खण्डमा तत्काल क बर्गको बैंक बन्नका लागि हामी तयार रहेको अवस्था छ ।
अहिले पनि हाम्रो सेवा कुनै ‘क’ वर्गको वाणिज्य बैंकको भन्दा कम छैन, तर पनि विकास बैंक भनेपछि जुन बुझाइ सर्वसाधारणमा रहेको छ त्यसलाई चिर्नका लागि हामीले नीतिले दिएअनुसार विकास बैंकबाट कमर्सियल बैंकमा स्तरोन्नति गर्नेगरी योजना बनाएर काम गरिरहेका छौं ।
स्थापना हुँदा देखिकै ‘क’ बर्गको बैंक नै बन्ने भन्ने हाम्रो लक्ष्यमा प्रतिबद्ध रहँदै त्यही गन्तब्यमा पुग्ने गरी हाम्रा कर्म र यात्राहरुलाई अघि बढाईरहेका छौं ।
बैंकको शाखा विस्तार गर्ने योजना के भइरहेको छ ?
अघिल्लो वर्षको निर्णय अनुसार हाम्रा सबै शाखा सञ्चालनमा आइसकेका छन् । चालू आर्थिक वर्ष सकिन अब ६ महीना बाँकी छ, तर यो वर्ष हामी जहाँसम्म नयाँ शाखा विस्तार गर्दैनौं । कोभिडका कारण अवस्था सामान्य भइनसकेकाले अहिले थप शाखा विस्तार गर्ने योजना छैन । आगामी वर्ष भने हाम्रो पहुँच नभएका सबै ठाउँतिर शाखा विस्तार गर्ने योजना बनाएर त्योअनुसार काम पनि गरिरहेका छौं । अहिले प्रदेश १ र २ मा हाम्रो उपस्थिति अलि पातलो छ, त्यहाँ पनि शाखा विस्तार गर्ने हाम्रो योजना छ । गरिमाको पहुँच नपुगेका ठाउँमा देशभर शाखा विस्तार गर्ने योजनासहित हामीले काम गरिरहेका छौं ।
बैंकका तर्फबाट वित्तीय साक्षरताका लागि के कस्ता कार्यक्रमहरु भईरहेका छन् ?
डेढ वर्ष अगाडिदेखि नै लगातार हामीले सबै ठाउँतिर सम्बन्धित उद्योग वाणिज्य संघ, गाउपालिका, नगरपालिकासँग समन्वय गरेर यस्ता कार्यक्रम गरिरहेका थियौं । अहिले कोभिडपछि त्यो स्थगित भएको छ । अवस्था सामान्य भइसकेपछि मोबाइल बैंकिङदेखि प्रविधिमा सबै साक्षर हुने गरी हामीले बिभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना बनाएका छौं । वित्तीय साक्षरताका कार्यक्रमहरु ग्रामिण क्षेत्रलाई लक्षित गरेर सञ्चालन गर्ने तयारी समेत भईरहेको छ ।
हामीलाई विश्वास गरेर यहाँसम्म पूर्याउनुहुने ग्राहकहरुप्रति हामी आभारी छौं । यसमा सञ्चालक समिति, कर्मचारीको पनि अहम् भूमिका रहेको छ, जसले गुणस्तरीय सेवा दिएर बैंकलाई यहाँसम्म पूर्याउनुभयो । मिडिया र नियमनकारी निकायहरुप्रति पनि हामी कृतज्ञ छौं । हाम्रो मूल नारा नै ”संस्थागत सुधार गरी वित्तीय क्षेत्रमा सबैको पहुँच” भन्ने हो, सोहीअनुसार हामीले काम गरिरहेकोमा आगामी दिनमा पनि यसैगरी अघि बढ्नेमा प्रतिबद्ध छौं । अझ राम्रो र गुणस्तरीय सेवा बनाउने गरी काम गरिरहेका छौं, यही प्रतिबद्धताको कार्यान्वयनका साथ हामी अघि बढिरहन्छौं ।
Previousनेपाली कांग्रेसद्वारा संसद विघटनविरुद्ध आन्दोलनका कार्यक्रम घोषणा
Nextआउन थाल्यो भारतबाट प्याज
निर्मलाको न्यायका निम्ति देशभर दबाबमूलक कार्यक्रम
२२ मंसिर २०७५, शनिबार ११:५३
एसपीमा सिफारिस गरिएका डिएसपी सन्जिव शर्मालाई निलम्बन गर्न गृहमन्त्रीको निर्देशन
४ श्रावण २०७४, बुधबार १२:१३
प्रहरीलाई छल्दै जनकपुर पुगेका सीके राउतले गरे संविधानको विरोध
३ आश्विन २०७५, बुधबार १८:१३
चीनमा रहेका नेपाली विद्यार्थी स्वदेश फर्काउने तयारी, १५ दिनसम्म ‘क्वारेन्टइन’मा राखिने
२० माघ २०७६, सोमबार ०९:४९
नेकपा फुटेकै छैनः काँग्रेस महामन्त्री कोइराला
साधनको चाप न्यूनीकरणलाई ‘कार्यालय समय’ लागू
सिरहामा शंकास्पद बस्तु फेला
बनेपामा प्रेसर कुकर बम फेला, सेनाले गर्यो डिस्पोज
प्रचण्ड माधबलाई ओलीको कटाक्ष, ‘ज्ञानेन्द्रसँग राति राति लुकेर रक्सी खाने मेरो बानी छैन’